Kungani ulwandle lushintsha umbala? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ulwandle luyinto ebalulekile ekwakhekeni kwezimo zezulu, izivunguvungu zingenye yezinto ezibaluleke kakhulu; hhayi ngeze, badla ukushisa kwamanzi. Asivamile ukucabanga ngakho, kepha siphila kwiplanethi eluhlaza okwesibhakabhaka; Noma, awu, okungenani lowo ngumbala obonwa ngamehlo ethu.
Yebo, nginesiqiniseko sokuthi abangaphezu koyedwa nabangaphezu kwababili bazobe bezibuza kungani ulwandle lushintsha umbala. Aluhlali luhlaza okwesibhakabhaka njalo? Okulandelayo sizokunikeza impendulo yombuzo wakho 🙂.
Isithombe - Biobiochile.cl
Amanzi asezilwandle ahlanganisa amaphesenti angama-71 omhlaba. Sihlolisise u-5% kuphela, kepha abaningi bethu bazovuma ukuthi umbala wayo uluhlaza okwesibhakabhaka. Kwesinye isikhathi iba mnyama, kwesinye isikhathi ibe lula. Konke kuzoncika ekugxileni kukasawoti kanye nohlobo lwempilo olukhona kuleyo ndawo. Ngakho-ke, amanzi amnandi kakhulu azocaca ukwedlula anosawoti, into esingayibona kalula eGulf of Alaska.
Kodwa, Kungani iguqula ubukhulu? Yebo, isizathu ukuthi amanzi olwandle amunca ingxenye yemisebe enemibala eyenza ukukhanya okumhlophe. Emini, isibonelo, imunca kuqala imisebe ebomvu, ephuzi noma ebomvu, kuyilapho okuluhlaza okwesibhakabhaka kuyikho okuboniswayo. Ngakho-ke, umbala uyashintsha ngokuya ngamahora, ukuboleka kanye nezinga le-insolation; ngaphezu kohlobo lwasolwandle njengoba sesike saphawula.
Ekugcineni, sikushiya nale vidiyo lapho ikhombisa umbala wolwandle eNyakatho ye-Atlantic nasogwini lwase-Iberia, okubangelwe wumsebenzi wokuphila kwezitshalo kusuka ngoJanuwari kuya kuJulayi 2017. Idalwe yi-EUMETSAT kanye ne-Monitoring Service ye-European Union Copernicus Marine Environment (CMEMS), esebenza ngeMercator Ocean.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Kungani ulwandle lushintsha umbala?